Laser Die Cutting kunye Kuguqulelwa Label, Bukanqinishe Materials, Retro-iingcinga Transfer Film - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Laser Die Cutting kunye Kuguqulelwa Label, Bukanqinishe Materials, Retro-Boneka Transfer Film
Laser Die Cutting kunye Imishini Ukuguqulelwa
Laser OMKHULU - INKQUBO laser FOR kufa OFANAYO kwaye awugqibe iilebhile
Malunga Ukuguqula System Digital
Ngophuhliso olukhawulezileyo oluntu kunye ukohlulwa kunye individuation iimfuno zabantu zokuphila, iteknoloji yedijithali iye yakhuthaza kunye neendlela wokushicilela ziye zatshintsha rhoqo. Yoshicilelo Digital iye kuyibika vuhlayiseki kushishino, njengoko liyanda inani lamashishini ezimfutshane run, amashishini asakhasayo elicwangcisiweyo, yaye, iimfuno okonga iindleko indalo, ikuthanda okusingqongileyo.
Ngentando yakho yoshicilelo yedijithali utsala abenzi ngakumbi nangakumbi iilebhile kunye noshicilelo package ngenxa ngesantya ngokukhawuleza, umgangatho ophezulu, imveliso ezikrelekrele kunye nenkqubo esizisebenzelayo.
Njengoko lukhula ushicilelo yedijithali, ngoko wenza laser die ukusika!
kwezenzo zethu kukunika abathengi kunye uluhlu olupheleleyo lomsebenzi kokugqiba izisombululo. yemodyuli, oluphezulu lwe lwethikh laser die ukusika yethu kunye nezisombululo nawokugqiba yenzelwe ukuba ihlangabezane nokulindeleyo kwaye ziya zikhula ngokukhula iimfuno zamashishini, ukuze ukwazi ukunikela izisombululo ezintsha ileyibheli kubaxumi zakho.
Ziziphi iingenelo laser die nangokukrola iilebhile?
laser koomatshini die-ukusika OMKHULU Laser likaThixo kakhulu ngabavelisi ileyibheli njengoko unako ukudala iintlobo ezininzi iilebhile kwindawo enye, ukuphakama-speed, inkqubo ezenzekelayo ngokupheleleyo.
Saving time. Akukho mfuneko ukwenza ngumngundo, ukuphelisa jeli ngumsina ukwenza ixesha.
izinto Ukucanda kunye nemizobo zingaguqulwa naliphi na ixesha. I-Laser ziyafumaneka kuluhlu olubanzi esimo: omnye okanye kabini laser umthombo.
Le nkqubo Galvo ivumela umqadi ukuhamba ngokukhawuleza kakhulu, ukuba focalized ngokugqibeleleyo kwindawo yokusebenza yonke. -High speed ukusika ukwanelisa iimfuno zabathengi 'ngexesha lenene.
Iklasi ehlabathini CO2 RF laser umthombo. Umgangatho aqingqiweyo usoloko ogqibeleleyo yaye rhoqo phezu ixesha iindleko phantsi yesondlo.
Kuba ngobuciko ukusika kunye iinkcukacha ojolise iindawo. Esi sixhobo uqinisekisa bungcono ngqo phezulu ngexesha beyiqangqulula iilebhile kunye isithuba ezitenxileyo ezinokwenzeka.
imisebenzi multi-isikhululo seemodyuli ezifana yoshicilelo flexo, wokulaminetha, UV varnishing, uqhoqhoqho, kunye rewinder, njl
Ofanelekileyo ukuba asebenze uluhlu olubanzi lwezinto
iphepha ecwebezelayo, iphepha Matt, ikhadibhodi, ipholiyesta, ezinepolypropylene, iplastiki, ifilim, njl
Ifanele iintlobo ezahlukeneyo zomsebenzi
Laser kufa ukunciphisa naluphi na uhlobo imilo - ukusika ngokupheleleyo kiss-ukusika (isiqingatha ukusika), perforating, ngentlabo, ukumakisha, uniko manani, njalo-njalo
Laser OMKHULU - Laser Die Cutting Machine Intshayelelo
Laser golden nkampani yokuqala China ukuzisa laser die-ukusika ubuchwepheshe nokupakishwa & yophawulo shishino. Its multi-isitishi-high speed laser die-ukusika umatshini seemodyuli buyisela uthotho koomatshini zemveli msebenzi efana umatshini bemveli die-ukusika, uqhoqhoqho umatshini, umatshini wokulaminetha, ivanishi umatshini yoshicilelo flexo, umatshini Ukubetha, kunye rewinder.
Zokunciphisa laser kufa kunye nezisombululo nawokugqiba nga ngaxeshanye ukufezekisa yoshicilelo flexo, wokulaminetha, ukusika, isiqingatha-ukusika, unobangela wezi, Ukuhlukunyezwa, ngentlabo, inani lezibuko, sokunyathela oshushu uqhoqhoqho . Kuye wasindisa iindleko zotyalo izixhobo ezininzi, yaye iindleko zabasebenzi kunye nokugcinwa ngenxa yokuprinta nokufakwa ezingxobeni abenzi. Luphawu ezisetyenziswa labels bokushicilela, iibhokisi ukupakishwa, amakhadi emibuliso, iiteyiphu kwimizi-mveliso namanye amashishini.
Iimpawu laser OMKHULU - QR Code / yebhakhowudi Vision Recognition System
Ukucanda rhoqo, ngaphandle kweziphazamiso ulungise imisebenzi kwi-i-okweempukane.
Ikhamera Icinga ngokuzenzekela ukuqaphela QR code / barcode.
Ukuyeka inkunkuma eziphathekayo.
ixesha zero ukutshona yokutshintsha indlela yemizobo, iqabane intle lwabashicileli digital.
Ububanzi Web 350mm / 13.7 "
Ububanzi Web obukhulu 600mm / 23.6 "
Speed ​​Web 0 ~ 80m / min (Speed ​​yahluka imizobo nje ezahlukeneyo, izixhobo, nende)
laser Source CO2 evaliweyo
Laser Cutting Ububanzi 340mm
Ukunikezwa amandla 380V 50Hz / 60Hz, isigaba Three
Ububanzi Web 230mm / 9 "
Ububanzi Web obukhulu 400mm / 15.7 "
Laser ukusika ngqo ± 0.1mm
uyilo yemodyuli, dyondzisaka esimo standard and ozikhethelayo
Standard uqwalaselo: imicu + web sikhokelo + laser die ukusika + ukususwa kwenkunkuma + single athe ngokubhijela
izinketho: yedijithali yoshicilelo yokushicilela / kubanda ngefoyile / ivanishi / screen / iflethi kwintshabalalo / hot sokunyathela / ngeenxa imela die ukusika / kabini jiko ...
Iphepha, ikhadibhodi, izixhobo eJonga, 3M tape mveliso, PP, PET, polyimide, polymeric, iplastiki kunye umboniso materials, njl
Ukutya neziselo iilebhile, zokuthambisa iilebhile, iilebhile sixhobo nendlu, iilebhile imveliso elektroniki, iilebhile eJonga, iibhokisi ukupakishwa isipho, icandelo gasket elektroniki, njl
EZINYE iilebhile SAMPLE
Awesome ESEBENZA UKUBA laser kufa OFANAYO KOMATSHINI OWENZIWE!
Industry Application and Case Customer Ukwabelana
ubuchwepheshe ekhawulezayo nenoqoqosho kwimveliso lwethikh
E Company umenzi iilebhile eshicilelweyo iminyaka engaphezu kwama-50 e-Central America. Ngenxa yokwanda odolo amancinci-volume elicwangcisiweyo, iindleko kweyakwantu die-nangokukrola iilebhile liphezulu kakhulu ukuhlangabezana nomhla wokuziswa ucele umthengi lowo.
Ekupheleni kuka-2014, inkampani savelisa-isizukulwana yesibini laser yedijithali die ukusika kunye nenkqubo nendawo ophela LC-350 ukusuka laser OMKHULU, kunye wokulaminetha varnishing imisebenzi ukuhlangabezana neemfuno zifanele ngakumbi abathengi '.
Okwangoku, le nkampani iye isiseko inkulu ukuveliswa iilebhile ezishicilelweyo kunye nemveliso ezingxobeni kule ngingqi, kwaye sele iphumelele iimbasa ezininzi ukusuka kurhulumente wengingqi, waba inkampani lwethikh kakhulu kukhuphiswano.
-Format Small ivanishi + laser die-asike isixhobo ezimbini-in-one
inkampani T yinto umenzi isiJamani iilebhile yokushicilela lwedijithali kunye nembali elide. It has imigangatho engqongqo kunye neemfuneko yokuthenga izixhobo. Phambi kokuba babesazi laser OMKHULU, zonke Equipments zawo zaye zathengwa eYurophu, yaye babezimisele ukufumana i-ifomati encinane UV ivanishi + laser die-yokusika ezimbini-in-nye umatshini siko. Ngowe-2016, ngokungqinelana neemfuno inkampani T, OMKHULU Laser zikhuliswe wena laser die ukusika umatshini LC-230. Ngenxa uzinzo ukusika isiphumo umgangatho ophezulu, nto leyo kakhulu ngabathengi. Kamsinya nje ezinye iinkampani ileyibhile baseYurophu bafika ngeendaba, waqhagamshelana laser legolide wathuma laser OMKHULU ukuvelisa yedijithali ileyibhile laser ukusika kunye neenkqubo nawokugqiba ezihlangabezana neemfuno zawo.
Inkampani M, ehamba umenzi yehlabathi iilebhile eziprintiweyo, laser wathenga kufa ahlabayo koomatshini evela eItali leminyaka eyadlulayo. Noko ke, izixhobo yaseYurophu iyabiza kwaye kuyabiza ukugcina, baye bezama ukufumana uhlobo olufanayo bomashini laser kufa ahlabayo. Xa Labelexpo 2015 e Brussels, amehlo abo yalikhanyisa xa wabona LC-350 laser die umatshini ukusika ukusuka laser OMKHULU.
Emva kokuba uvavanyo ngokuphindaphindiweyo kunye nophando, ekugqibeleni bakhetha laser OMKHULU LC-350D kabini-intloko-high speed Umatshini laser die ekwehliseni kunye nokusebenza iindleko ngcono. Le nkqubo ubaleka ngesantya ukuya kwi-120 m / min, kunye kwisikhululo semi rotary, roll-to-sheet ukwamkelwa amaqonga kunye nezinye iinkqubo ezongezelelweyo ukuphucula ixabiso lweemveliso umthengi lowo.
Clothing nezitsha zezihlangu kushishino
Retro-Boneka izinto laser ukusika
inkampani R inkampani textile izincedisi iqela processing inkulu ehlabathini. Bafaka ngaphezulu kwe-10 Iiseti laser OMKHULU Mars series XY axis laser yokusika koomatshini kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Njengoko imiyalelo ukwanda, izixhobo zabo ezikhoyo ayikwazi ukuhlangabezana neemfuno zalo imveliso. Laser OMKHULU liqulunqe inkqubo die-nangokukrola laser ufuna ulwenziwo wayo, nto leyo esisetyenziselwa nangokukrola izinto ekhanyayo.
/ Amakhasethi Double Side Bukanqinishe Single
iimpawu ngokubanzi olu hlobo tapes:
Ububanzi roll ixhaphakileyo bekuya kuba 350mm
Ubukhulu ukusuka 0.05mm ukuya 0.25mm
ukusika elipheleleyo kiss ukusika kwi makhasethi kuluhlu